सलमान खान जेल जाँदा हुनेछ ६ अर्बको क्षति : रोकिनेछन यी २ फिल्म | Jukson
सलमान खान जेल जाँदा हुनेछ ६ अर्बको क्षति : रोकिनेछन यी २ फिल्म
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई हरिण हत्याको एउटा मुद्दामा जोधपुर अदालतले पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको छ।
सलमान जेल जाँदा बलिउडमा कति रकमको नोक्सान हुन्छ? अहिले यो प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर बहस भइरहेको छ।
सन् १९९९ मा बनेको फिल्म 'हम साथ साथ है'को सुटिङका क्रममा सलमानले हरिण मारेका थिए। सो प्रकरणमा बिहीबार अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हाे।
सलमान खान अहिलेको मितिबाट ५ वर्ष जेल परेमा करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अर्थात् ४ अर्ब भारु दाउमा पर्ने देखिएकाे छ। सलमान खानसँगै बलिउडकाे मनाेरञ्जन क्षेत्रले याे रकम गुमाउने विश्लेषण गरिएकाे छ।
१५० करोड रुपैयाँको फिल्म रेस-३
अहिले सलमान खानको फिल्म 'रेस-३' को सुटिङ जारी छ। सलमान मुख्य भूमिकामा रहेको यो फिल्मको लागत १५० करोड भारु हो। यसको सुटिङ पूरा भइसकेकै छैन। यदि सलमान जेल चलान भए यो फिल्मको काम बीचमै रोकिनेछ। यसले गर्दा निर्माताको रकम डुब्नेछ।
सम्बन्धित समाचार : सलमान खानलाई पाँच वर्षको जेल सजाय
१०० करोडको दबंग-३
दबंग श्रृंखलाका तेस्रो फिल्म 'दबंग-३' को सुटिङ छिटै सुरु हुँदैछ। यो फिल्मका अघिल्ला दुवै श्रृंखलामा सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हा देखिएका थिए। तेस्रोमा पनि सलमान खान मुख्य भूमिकामा हुने निश्चित भइसकेको छ। यो फिल्मको बजेट १०० करोड भारु रहेको छ।
प्रि पोडक्सनमा छन् केही फिल्म
फिल्म व्यापारका समीक्षक अमोद मेहराका अनुसार 'रेस-३' का अतिरिक्त 'दबंग-३', 'किक-२' तथा भारतमध्ये कुनै फिल्मको पनि सुटिंग सुरु भएको छैन। फिल्म सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रि प्रोडक्सनको काम सुरु हुन्छ। यसका लागि कम्तिमा पनि १०० करोड भारु खर्च भइसक्छ। त्यसैले सुटिंग सुरू नभएका उनी उनुबन्धित फिल्मले १०० कराेडकाे हाराहारीमा खर्च गरिसकेका छन्।
टिभी शोमा पनि पर्नेछ असर
उनी जेल चलान हुँदा फिल्म मात्र होइन उनका टेलिभिजन रियालिटी सोमा पनि असर पर्नेछ। उनी दश वर्षपछि ‘दशका दम’ लिएर फर्किंदैछन्। यो गेम शोको प्रोमो हालै सार्वजनिक भइसकेको छ। यो छिटै सुरु हुने क्रममा छ। यो कार्यक्रमको होस्ट सलमान आफैँ रहने योजना छ।
अमोद मेहेरा भन्छन्, ‘दशका दम-२ को शो का लागि च्यानलले धेरै खर्च पहिलै गरिसकेको छ। यसले टिभी उद्योगलाई मात्र नभएर सलमानको करिअरलाई पनि ठूलो नोक्सान पुग्नेछ।’ यो बाहेक सलमान खान टिभी शो बिग बोसमा होस्टको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म सिजन १२ को लागि प्रि पोडक्सनको घोषणा भइसकेको छैन।
सलमान खान ती सुपरस्टार हुन् जो माथि बलिउड मनोरञ्जन उद्योग धेरै हदसम्म निर्भर छ। यदि उनी जेल चलान भएमा हरिण मारेको गल्तीको सजाय बलिउडका ती सबैले भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेलमा सलमान लाई भेटे वकिल देसाई र बडिगार्ड शेराले : के तारिखमा छुट्लान त सलमान ?
भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई दियो दुई अर्ब १० करोडको चेक
मलेसियामा गोर्खाली सेनाको प्रशंसा
सन्दीपले जति माया दिए पनि सुरभीलाई किन नपुग्ने ?